Semalt ले SMM मा तपाइँले बेवास्ता गर्नु पर्छ के गलत बताउँछ
२०१ 2017 मा ग्राहकहरूले सामाजिक संगठनहरू मार्फत उनीहरूसँग नियमित सञ्चार कायम गर्ने व्यापार संगठनहरूले अपेक्षा गरेका छन्। यद्यपि धेरै ई-वाणिज्य कम्पनीहरूले ग्राहकलाई आकर्षित गर्ने र कायम राख्न सोशल मिडिया प्रमोशन र सर्च इञ्जिन अप्टिमाइजेसन (SEO) को प्रभावकारितालाई वेवास्ता गर्छन्।
Semalt का ग्राहक सफलता प्रबन्धक ज्याक मिलरले सामाजिक मेडिया मार्केटि campaigns अभियानहरू सञ्चालन गर्दा संगठनहरूले गर्ने तीन ठूला गल्तीहरू देखाउँदछ ।
१. प्रभावकारी रणनीतिविना अभियान सुरु गर्दै
अनलाइन मार्केटिंग रणनीति सुधार गर्न सामाजिक मिडिया लक्ष्यहरू विकास गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। सामाजिक मिडिया मार्केटिंगका धेरै लक्ष्यहरू हुन सक्छन्। एक लक्ष्य लक्षित ग्राहकहरु बीच ब्रान्ड जागरूकता सुधार गर्न को लागी हुन सक्छ। सामाजिक मिडिया मार्केटिंगको अर्को लक्ष्य सामाजिक नेटवर्क प्रयोग गरेर ग्राहक समर्थन सेवाहरू प्रस्ताव गर्न सकिन्छ। राम्रो सामाजिक मिडिया रणनीतिले लक्षित ग्राहकहरूसँग व्यापारको अन्तर्क्रिया बढाउने धेरै गोलहरू संयोजन गर्दछ। एक प्रभावी रणनीति एक राम्रो सामाजिक नेटवर्क प्लेटफर्म छ।
व्यवसाय जुन फेसन वा जीवन शैली उत्पादनहरू र सेवाहरूसँग सम्झौता गर्दछन् Pinterest वा Instagram सामाजिक नेटवर्क प्लेटफर्महरू प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिन्छ। Pinterest एक ई-वाणिज्य समारोह छ कि ग्राहकहरु लाई उत्पादनहरु वा सेवाहरु अनलाइन खरीद गर्न सक्षम गर्दछ। खुद्रा विक्रेताहरू जसले शिल्प उत्पादनहरू प्रदान गर्दछ र आफैंले आफैं सेवाहरू प्रदान गर्दछ YouTube र फेसबुक प्लेटफर्महरू उनीहरूको उच्च भिडियो साझेदारी क्षमताहरूको कारण। यो व्यवसायको सामाजिक नेटवर्क साइटहरु लाई बढावा दिन महत्वपूर्ण छ।
ईमेलमा सामाजिक मिडियाको उल्लेख लक्षित ग्राहकहरु लाई सामाजिक मिडिया साइटहरु लाई बढावा दिन पनि एक प्रभावी दृष्टिकोण हो। अर्को राम्रो प्रचार एसईओ दृष्टिकोण व्यवसाय वेबसाइट मा सामाजिक मिडिया लिंक सम्मिलित मान्दछ।
२ सुन्न र जवाफ दिन असफल
ग्राहकहरू सँधै व्यावसायिक संगठनहरू द्वारा प्रस्ताव गरिएका उत्पादनहरू र सेवाहरूको बारेमा टिप्पणीहरू दिन्छन्। कम्पनीको व्यवस्थापनको लागि ध्यान दिनु महत्त्वपूर्ण छ। त्यहाँ धेरै उपकरणहरू छन् जुन ग्राहकसँग कुराकानी गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ, उदाहरणको लागि, सामाजिक उल्लेख र Hootsuite। यद्यपि तिनीहरू क्षमताहरूमा सीमित छन्। त्यसकारण, व्यवसाय प्रयोगकर्ताहरू द्वारा कुनै पनि पोष्टमा उत्तरदायी हुनुपर्दछ।
फेसबुक एक सामाजिक मिडिया प्लेटफर्म हो कि लक्षित ग्राहकहरु को लागी सन्देशहरु लाई प्रभावकारी प्रतिक्रिया गर्न व्यवसाय लाई सक्षम बनाउँछ। सेवाहरू र उत्पादनहरू वितरण गर्दा कम्पनीहरूले धेरै चुनौतिहरूको अनुभव गर्छन्। सामाजिक नेटवर्कहरूले कारोबारलाई ग्राहकहरूलाई समस्याहरू वा व्यापार सञ्चालन प्रक्रियामा हुने चुनौतिहरूको बारेमा जानकारी दिन सक्षम गर्दछ।
Exper. प्रयोगबाट जोगिदै
सामाजिक नेटवर्कहरूको अपरेशनसँग प्रयोग गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। व्यापारले ग्राहकहरु संग संलग्नको अभिनव तरिकाहरु प्रयोग गर्न सक्दछ। प्रत्यक्ष भिडियो फेसबुक र इन्स्टाग्राममा उपलब्ध हुने सुविधा हो। यो कम्पनी कर्मचारी र ग्राहकहरु बीच वास्तविक समय संचार सुधार गर्दछ। एउटा कम्पनीले प्रत्यक्ष भिडियो सुविधाको माध्यमबाट लक्षित दर्शकहरूलाई नयाँ उत्पादको बारेमा जानकारी दिन सक्दछ।
व्यवसायले फेसबुक उत्पाद प्रचार अभियानको लागि लाइभ स्ट्रिम पनि प्रयोग गर्न सक्दछ। प्रत्यक्ष स्ट्रिमिंगले ठूलो श्रोतालाई आकर्षित गर्दछ किनकि यो अन्तर्क्रियात्मक छ र उपयुक्त एसईओ कुञ्जी शब्दहरूको उपयोग गर्दछ। सामाजिक मिडिया प्रयोगकर्ताहरूलाई प्रश्नहरू सोध्ने र स्पष्टीकरण खोज्ने अवसर दिइन्छ। प्रत्यक्ष स्ट्रिमि session सत्रले व्यवसायलाई ग्राहकहरूबाट सिक्नको लागि सक्षम गर्दछ, विशेष गरी ग्राहक सन्तुष्टि बढाउने क्षेत्रमा।
तपाइँको अभ्यासमा SEO लागू गर्नाले सामाजिक मिडिया मार्केटिंग प्रयासहरू सुधार गर्न सक्दछ। SEO विशेषज्ञहरूले उनीहरूको सामाजिक मिडिया पोष्टिंगहरूमा प्रभावकारी कुञ्जी प्रयोग गर्न सक्दछन्। ग्राहकहरू पोष्टिंगमा आकर्षित हुनेछन् जसमा उत्पादन वा सेवाको प्रभावकारिताको बारेमा सान्दर्भिक जानकारी हुन्छ।